သင့် Computer အတွက် SSD ပြောင်းသုံးပြီးပြီလား ~ The ICT.com.mm Blog
သင့် Computer အတွက် SSD ပြောင်းသုံးပြီးပြီလား
သင့် Computer အတွက် SSD ပြောင်းသုံးပြီးပြီလား။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူပြောများနေတဲ့ SSD ဆိုတာဘာကြီးလဲ၊ သူ.ကိုသုံးရင် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ၊ တကယ်ရော အသုံးဝင်ပါ့မလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ သင့်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Post ကို ဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ။
Computer မှာ Operation system လည်ပတ်နိုင်ဖို့နဲ့ သင့်ရဲ. Data တွေကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ဖို့ Storage device လိုအပ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ HDD (Hard Disk Drive ) ဆိုတဲ့ အမျိုးစားကိုအများစုအသုံးပြုနေကြဆဲပါ။
SSD (Solid State Drive) ဆိုတာကတော့ HDD ထက်ပိုပြီး ကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။
HDD ထက် ပိုကောင်းတဲ့ SSD ရဲ့ အားသာချက်ကဘာလဲ??
Computer ဖွင့်ပြီးရင် တော်ရုံနဲ့သုံးလို့မရဘဲ အရမ်းလေးနေတယ်၊ ပြန်ပိတ်ရင်လည်းတော်ရုံနဲ့မပိတ်သွားဘူး၊ သုံးရတာလည်း တချိန်လုံး ဟန်းနေတော့တာပဲ။ ဘာကြောင့်လဲ။
Storage device တွေမှာ အရေးကြီးဆုံးအစိတ်ပိုင်းဟာ Speed ပဲဖြစ်ပါတယ်။
HDD တွေဟာ Read/Write speed မှာ အမြင့်ဆုံးမှာ 150MB/s လောက်ပဲရှိပေမဲ့ SATA SSD တစ်လုံးဟာ 600MB/s အထိ Read/Write လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ (HDD ထက် ၅ဆပိုမြန်ပါတယ်)
PCIe/M.2 SSDs တွေဆို 2.2GB/s (HDD ထက် ၁၀ဆပိုမြန်ပါတယ်) အထိတောင် အမြင့်ဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ Speed မြန်ဆန်လာတဲ့အတွက် သင့် Computer ရဲ. Operation System လည်ပတ်မှုအတွက်ရော Data အကူပြောင်းအတွက်ပါ အများကြီးပိုကောင်းလာပါတယ်။
Durability အကြမ်းခံနိုင်စွမ်းမှာလည်း SSD တွေက HDD တွေထက်အများကြီးပိုသာပါတယ်။ HDD တစ်လုံးဟာ Magnetic platter တွေနဲ့လည်ပတ်နေရတာမို့ အသုံးပြုနေတဲ့အချိန် Computer ကို လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့အခါ ပျက်စီးနိုင်ခြေများပါတယ်။
SSD တွေကတော့ Chip ပြားလေးကိုသာအသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ဘယ်လောက်ပဲပြင်းထန်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါစေ ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်၊ ( ခရီးသွားရင်း ကားပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်တတ်သူတွေအတွက်ဆို ပိုလို့တောင်အဆင်ပြေနိုင်ပါသေးတယ်။ )
ပြီးတော့ HDD လို အစိတ်ပိုင်းပေါင်းများစွာနဲ့ လည်ပတ်နေရတာမဟုတ်လို့ ပျက်စီးနိုင်ခြေလည်း အတော်နည်းပါတယ်။
ဆိုတော့ကား အားလုံးကိုခြုံပြောရရင် SSD တွေဟာ မြန်ဆန်မှု၊အကြမ်းခံနိုင်စွမ်းနဲ့ ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ အားသာချက်တွေရှိပါတယ်။
အရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ SSD တွေရဲ့ စျေးနှုန်းဟာ နည်းနည်းများနေတယ်ဆိုပေမဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ အများစုသုံးနိုင်တဲ့စျေးဖြစ်ပြီမို့ ပြောင်းသုံးသင့်ပါပြီ။
ကိုယ့် Computer ကရော SSD အသုံးပြုလို့ရရဲ့လား??
SSD တွေမှာ SATA နဲ. M.2 ဆိုပြီး interface နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ M.2 တွေကတော့ SATA ထက်ပိုပြီးမော်ဒယ်မြင့်ပြီး ပိုကောင်းပါတယ်။ M.2 ကိုအသုံးပြဖို့ M.2 support လုပ်တဲ့ Motherboard or Laptop ဖြစ်ရပါမယ်။ M.2 Support မလုပ်ဘူးဆိုရင်တောင် SATA ကိုသုံးလို့ရသေးတဲ့အတွက် Computer တိုင်းမှာအသုံးပြုလို့အဆင်ပြေတယ်။
ဆိုတော့ကာ သင့် Computer မှာရော လေးလံနှေးကွေးနေတယ်ဆိုတဲ့ HDD ကြီးကိုသုံးနေအုံးမှာလား ၊ ခေတ်နဲ့အညီ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ နောက်ကျမနေအောင် ဒီနေ့ပဲ SSD ပြောင်းလိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
Newer TCL 2.1 Channel Sound Bar With Wireless Subwoofer (TS3010) အကြောင်း
Older Audio Star Karaoke All-in-one Touch (HD) 6TB HDD အကြောင်း